I-10 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 10, 2020
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ukuhlanganiswa kwe-ammunition kuqale ku-AKSUNGUR Unmanned Vehicle Vehicle, eyakhiwa ngu (TUSAŞ) ngolwazi olutholwe kuphrojekthi ye-ANKA. I-TÜBİTAK Defense Imboni Ukucwaninga Nentuthuko ngaleyo ndaba [Okuningi ...]
Imvume Yokuthengisa Yomuthi Wezasekhaya KOV KD-19
UMnyango Wezempilo unikeze imvume yokuthengisa kulo muthi okhiqizwe yinkampani ekhiqiza amakhambi wendawo ukuze usetshenziselwe ukwelashwa kwe-coronavirus (KOVID-19). I-akhawunti esemthethweni yezokuxhumana kaMongameli uFahrettin Altun [Okuningi ...]
Amacala aseCorona aqala ukukhuphuka futhi eJalimane
Ukwanda kwamacala egciwane le-corona ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuthi imingcele yezenhlalo iqale ukukhululeka eJalimane, kwaveza ukukhathazeka ngokuthi lo bhubhane ungaphinde uphume ungalawuleki. Encwadini yezindaba yansuku zonke yeRobert Koch Disease Control Institute, [Okuningi ...]
I-Istanbul Airport Metro Project I-TBM Tunnels Cendony Ceremony
UMongameli Recep Tayyip Erdoğan uthe bazoqhubeka nalo mqhudelwano kuze kube bayaphefumula okokugcina. U-Erdogan uhambele iGayrettepe-Kagithane Istanbul Airport Metro Project iTBM Tunnels Completion Ceremony ngengqungquthela yevidiyo futhi wenza inkulumo lapha. Kusuka enkulumweni ka-Erdogan [Okuningi ...]
UMongameli Aktaş Asphalt Workers Made Sahur
UMasipala waseBursa Metropolitan ushintshe isikhathi esimisiwe esetshenziswa ngezimpelasonto ngenxa yokuqubuka kwegciwane le-corona laba ngamathuba futhi saqala ukuhamba okwenzeka ezingxenyeni ezinkulu zemithambo okungakaze kuvuselwe iminyaka engu-15 ukuya ku-20, futhi kuyaqhubeka ngokungaphazamiseki phakathi kwe-Acemler - Merinos. [Okuningi ...]
Turkey AVM Lapho ngihlangana Isiko?
Mall isiko ngoba Turkey wokuqala kwaqala ngo-1987 ne Galleria Mall. Lokhu kusakazwa kwaqhubeka neCapitol AVM kwavulwa ngo-1993. zezitolo ngobukhulu eTurkey Lokhu 14 AVM'si [Okuningi ...]
Usuku Olubucayi Kwezokuthutha Komphakathi nge Normalization Kusasa!
Ngokwesilinganiso sokulwa kwe-coronavirus, kuthathwa izinyathelo ezijwayelekile kwezinye izindawo njengakusasa. Ukukhonjiswa okuyinhloko kwalokhu kuhloswe ukuthi kube nakho kokuhamba komphakathi. Ngoba yonke imikhawulo yokuhamba komphakathi iyaqhubeka ngoMsombuluko, ngoMeyi 11, [Okuningi ...]
Umsebenzi wokuvuselela uyaqhubeka esiteshini sasebhasi i-Grand Istanbul
I-IMM iyaqhubeka nokuguquguqula ukuhamba kwedolobha lonke ekusebenzeni ngenxa yemikhawulo yokubekelwa ekhaya. Imisebenzi yokulungisa, ukulungisa nokulungisa yaqalwa eGreater Istanbul Bus terminal, ebinganakwa kusukela ikota yokugcina yekhulu leminyaka. [Okuningi ...]
Isaziso sezokuThutha ngoMeyi 11 sisuka ku-IMM! Uncamela Ukuhamba noma Ukuhamba Ngebhasikidi
UMasipala wase-Istanbul Metropolitan, uxwayise ngodaba olujwayelekile oluzoqala ngoMsombuluko, ngoMeyi 11. I-IMM isebenzisa izimoto ezizimele e-Istanbul, kodwa okubaluleke kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi azophinde asebenze. [Okuningi ...]
I-TCDD Tasimacilik isiqede amalungiselelo wethimba nemishini ukuqala kabusha izinsizakalo zeStrake Speed ​​(YHT), ezimisiwe ngenxa yokuqubuka kwe-coronavirus; Isilindelwe Isibonakaliso Esivela kuMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda u-Olcay Aydilek waseHabertürk [Okuningi ...]
Abakwa-Gendarmerie kanye nabaSebenzi Bogu Basogwini Bazohlomula EzokuThutha Komphakathi mahhala
Isinqumo esilawula ukusetshenziswa kwamahhala kwezinsizakalo zokuhamba zomphakathi sishintshiwe. Ngokwalokhu kuchitshiyelwa, i-gendarmerie kanye nabasebenzi abagada ogwini nabo bazohlomula ngezinsizakalo zokuhamba komphakathi mahhala. Ngubani ongathola usizo ngezinsiza zokuhamba zomphakathi mahhala 2002/3654 [Okuningi ...]
Inani le-İstanbul AVM 2020
Istanbul, Turkey e sürdüy jikelele umahluko wokuba umuzi AVM'si kakhulu. Kunengqikithi yama-125 e-Istanbul. Kuhlelwa ukuthi kuvulwe imakethe entsha yezitolo e-Istanbul ngo-2020. Nanka ama-Top 10 Shopping Malls e-Istanbul [Okuningi ...]
UNkk Zübeyde wayegujwa ngoSuku Lomama
IMeya kaMasipala wase-Izmir Metropolitan, uTunç Soyer, obehambele umcimbi wesikhumbuzo eZübeyde Hanım Memorial Tomb ngosuku lukaMama, uthe, "Namuhla sibakhona ngokomoya ngokomoya mama wethu omkhulu." Ukugcizelela ukuthi akwanele ukukhumbula omama ngosuku olulodwa [Okuningi ...]
Ngubani uSüleyman Karaman?
USüleyman Karaman (1956, Alaçayır Village, Refahiye) ngunjiniyela wemishini futhi owasebenza njengomphathi jikelele we-TCDD. Impilo Yezezifundo Ngemuva kokuqala impilo yakhe yemfundo e-Erzincan, waya e-Istanbul Pertevniyal High School ukuthola imfundo yamabanga aphezulu. [Okuningi ...]
Bambalwa Kukhona izikhungo yezitolo Turkey?
ETurkey, kukhona okwamanje bangu-436 izingcezu Mall. Izitolo ezinkulu ziyasiza emnothweni ngamamitha-skwele ayizigidi eziyi-13,2 sendawo etholakala kalula. Umkhakha wezitolo, okhula usuku nosuku, unesilinganiso sama-2020 ukusuka ngasekupheleni kuka-445. [Okuningi ...]
Ukuqashwa okuqinile kusuka ku-Izmir Metropolitan kuya ezitolo ezinkulu zezitolo!
Umasipala we-Izmir Metropolitan udlulise imithetho okufanele ilandelwe kancane kancane ngenxa yokuqubuka kwecoronavirus. Ithimba lamaphoyisa kuMasipala Metropolitan lizoqala ukuhlolwa ngoMeyi 11. Izmir Metropolitan [Okuningi ...]
Elinye i-304 Bus to iqhaza ku-ESHOT Fleet
Umasipala we-Izmir Metropolitan ukhokhela amabhasi angama-134, kubandakanya no-170 bellows kanye nama-solo ayi-304. Izimoto zizohanjiswa kungakapheli izinyanga eziyisishiyagalolunye ngemuva kokusayinwa kwenkontileka. Izmir Metropolitan Municipality, izimoto zamabhasi [Okuningi ...]
Ukusekelwa Kwezenhlanzeko zeBarber Nezinwele
UMasipala wase-İzmir Metropolitan uzohlinzeka ngosizo lokuhlanzeka kubabhemayo nasezinweleni zezinwele, ezizovulwa kabusha ngoMeyi 11 ngokuhambisana nesiyingi soMnyango Wezangaphakathi. Amathimba weDedigital Directorate ye-İzmir Metropolitan Environmental Planning and Control Branch Directorate shop [Okuningi ...]
Inkonzo Yokuqondisa yabafundi babafundi abayizigidi eziyi-19 nabazali ekuhlanganiseni i-'Covid-12,5 'nge-MEB
Ngesikhathi sokusebenza kwe-coronavirus, abafundi nabazali abayizigidi eziyi-1,5 12 nabazali banikezwe umhlahlandlela esikhathini esiyizinyanga eziyi-500. UNgqongqoshe Wezemfundo Kazwelonke uZiya Selçuk uthe, 'Ukusuka ekuhlinzekeni insizakalo yokuqondisa enkulu kangaka [Okuningi ...]
Izingqinamba eziphathelene nokwesekwa kobisi olungavuthiwe okufanele zinikezwe abakhiqizi bezobisi kulo nyaka kanye nokulawulwa kwemakethe yobisi sekucacile. Isinqumo SikaMongameli Sokwesekwa Kobisi Olwenziwayo kanye Nokulawulwa Kwemakethe Yobisi ezokwenziwa ngonyaka we-2020, ngokusemthethweni [Okuningi ...]
Umhlangano webhodi le-13 Advisory Board, eholwa nguNgqongqoshe Wezokuhweba, uRuhsar Pekcan, wabanjwa kusetshenziswa ama-videoconferencing. Ngaphezu kwePekcan, ingqungquthela; UMongameli we-TİM İsmail Gülle, uMongameli we-DEİK uNail Olpak, uMongameli we-TOBB uRifat Hisarcıklıoğlu, [Okuningi ...]
Turkey Ukuqaliswa Healthy ukuvakasha Certification Uhlelo
UMnyango Wezamasiko Nezokuvakasha wethula uhlelo lwe-Healthy Tourism Certification, oluzosebenza kusukela ngenkathi yehlobo ka-2020. Ngaphansi kobuholi boNgqongqoshe, ngeminikelo yoNgqongqoshe Wezempilo, EzokuThutha, Wezangaphakathi kanye Nangaphandle nokubambisana nabo bonke ababambe iqhaza emkhakheni. [Okuningi ...]
Beyoğlu Amasiko Emigwaqo Yomgwaqo Qhubeka
Ngenhloso yokwenza isikwele lapho iGalata Tower ibaluleke khona kakhulu mayelana nezokuvakasha nokwenza kube yindawo yokuqala amasiko nemisebenzi yezobuciko, imisebenzi ku-Beyoğlu Culture Road Project, eyayilungiswa nguMnyango Wezamasiko Nezokuvakasha, [Okuningi ...]
Ukuhamba Ngekhwalithi Kuza Emigwaqweni eBursa
Imigwaqo ebingagcinwanga iminyaka ngenxa yobuningi bethrafikhi eBursa ithola induduzo ngokubonga isikhathi. Umasipala waseBursa Metropolitan, ovuselele ukusungulwa kweMerinos - Inkomba ye-Acemler ngempelasonto edlule, manje usefana [Okuningi ...]